Best 24 Compass Tattoos Design Maonero Kwevarume nevakadzi - Tattoos Art Ideas
Best 24 Compass Tattoos Design Mazano Kwevarume nevakadzi
Compass tattoo ndiyo tattoo yakakurumbira yakave iripo kwemakore ikozvino. Chiratidzo chechikepe chakashandiswa nevashambadziri kwemakore nekuti vanotenda kuti zvaizovabatsira kuti vararame mumvura ine simba uye vanovimbisa kuti vaizoenda kumba vakachengeteka.
Chimwe chezvikonzero zvinoita kuti vanhu vaende #compass tattoo ndeyekuti zvinomirira chii. Compass tattoo ine zvinoreva zvakasiyana asi kune avo vari mumvura, inokosha chaizvo. Zvinoreva chiratidzo chekanaka, kuchengetedzwa uye kutsigirwa. Chiratidzo chinouya nenzira dzakasiyana-siyana uye mitambo. Kune marudzi ezviratidzo izvi ane tsanangudzo dzakawanda kune anorema. Kutevera nhoro dzako ndechimwe chezvinoreva iwe tattoo. Iwe haufaniri kutamira kure kuti uite mamiriro ako muupenyu hunozivikanwa kune vamwe. Neichi chinyorwa, zviri nyore kwauri kuti uudze nyika yako nyaya yako pasina kuita inzwi.
Kutora pane chikamu chipi nechipi chemuviri we #tattoo chinokuudza chikonzero nei iwe wakanyora tattoo pakutanga. Inomirira kutungamirirwa uye kutungamirirwa, uyewo chiratidzo chekanaka. Ichi ndicho chikonzero nei mifananidzo yakawanda yekambasi inogona kuonekwa yakaiswa pazvikepe. Kuzivikanwa kwechitema ndicho chimwe chinhu chaunogona kuonga paunenge uchiona chero chipi zvacho. Mazuva ano, haasisiri varume vari kushandisa iko asiwo vakadzi vanoda kutarisa fashoni.
Kudzivirirwa ndechimwe chezvikonzero nei vanhu vari kushandisa iko uye kune vafambisi vezvikepe, vanozviona sechiratidzo chekanaka. image source
Isu tinowanzoona zviratidzo zvemakomasia akaiswa mune dzimwe ngarava zvakare sechiratidzo chekanaka. Nhau dzevanhu vari kushayikwa panguva yakaoma mafashu dzakabatsirawo kambasi tattoo kuti inzwisise zvizere nevanhu vanoishandisa. image source
Zvinotendwa kuti nechiratidzo chakadaro pamuviri, pane tariro yekuona vanhu vakadaro vari vapenyu. image source
Kune kusiyana kwakasiyana-siyana uye mitambo inouya nematambo aya. Kune makomasi akafanana nekambasi yeprismatic, kambasi ye Vegvisir, kambasi yepaestestone, kambasi yekudenga uye kambasi yekambasi kunzi mazita mashoma aya image source
Izvi zvinorevei kuti iwe haufaniri kuva mukepe kuti ushandise tattoo. Iyo inonyanyozivikanwa yekambasi idzi ndiyo nyanzvi yekambasi inoshandiswa kureva North North. image source
Nyeredzi yeNyakabva yakashandiswa kusati kwekombiyuta uye mapepa akauya kuzobatsira vanhu kuwana mazano avo. image source
Nyeredzi nyeredzi inomiririra kutungamira, kutungamira uye nzira yekuwana kumba yakachengeteka. image source
Nguva uye kambasi yakagara ichibatana pamwe chete. Imwe nzira iri nyore yekuita izvi ndeyekuisa hourglass kana awa mu #design yekambasi. image source
Nyika uye mapepa zvinotambawo basa rakakura semafasitasi anogara achibatsira vanhu kuti vawane nzira yakarurama. image source
Compass tattoos inoshandiswawo kumirira kutevera kurota kwevanhu. Nekambasi tattoo, unovimbiswa kuti kurota kwako muhupenyu hakuzomboparadzwi. image source
Mazano paKakasi Kambasi Tattoo
Iyo kambasi ichakubatsira iwe kuisa pfungwa dzako pane zvido zvehupenyu hwako. Hazvisizvo kuti iwe usiye kambasi yako usina kutamba-famba nayo. image source
Unogona kuwedzera zviratidzo zvakasiyana nayo kana uchida. Iwe ndiwe unonyatsoziva zvauri kuda kusvika pakuguma kwezuva.
Kana iwe une chimiro chakanaka, iwe uri zororo nokuti iye achakupa iyo inogadzirisa iyo inoparadza pfungwa dzako. Iyo kambasi inogona kuiswa pane chero chikamu chemuviri wako. image source
Kutenda kumarudzi akasiyana-siyana ehutano hwevanyori vemattoo pasi rose. Iwe haugoni kuona kambasi yekambasi uye hauna kutarisa kwechipiri pairi. image source
Hapana imwe nzira yemugwagwa iyo kambasi inogona kutibatsira kutenderera. Ichi ndicho chikonzero nei vanhu vari kushandiswa kwekambasi mamatidzi akadai. image source
Iyo inking yekambasi inonzi tattoo inogona kuinwa pane chero chikamu chemuviri. Dzimwe nguva, tinoona kambasi tati dzinoona zvisingaenzaniswi. image source
Iyo kambasi inonzi tattoo inogona kutaurwa kuti ndiyo chiratidzo cheNorth Star uye icho chave chichinyorwa chemazana makashambasi. image source
Munhu wese anokwanisa kushandisa tattoo iyi nokuti inoratidza kana inomiririra kutarisa kana kutungamira. Kune avo vari kufunga nezvemapurogiramu okutanga kana avo vakakunda mamiriro ezvinhu chaiwo, vanogona kushandisa chirevo ichi kuti vayeuchidze nezvemangwana kana yekare. image source
Ndezvipi zvamungati pamusoro peizvi tattoo? Iyo yakagadzirwa yakanakisisa zvikuru nemagadzirirwo emagetsi pairi. image source
Chidya chinogona kutarisa madzimai madzimai kana vachigona kuve nemattoo pairi. Pane zvakasiyana-siyana zvaunogona kushandisa apo paunenge uchikwanisa kambasi tattoo pane chinhu chako. image source
Hapana chinhu chinoshamisa semhando yekambasi inogona kuratidza shoko rine simba kwauri semukadzi. Kambasi inogona kufamba nenzira yose mukuvimbisa kuti chidya chako chinotaura mharidzo huru. image source
Vakadzi vachada izvi zvisingabviri asi, iyo inofadza kambasi tattoo. Zvinhu zvizhinji zvinowanikwa pakambasi kubatsira mubatsiri kuramba achivimbisa uye achitenda mune zvakawanda. image source
Musana unogona kushandiswa mukuratidza mashizha makuru emakasi kumushure. Musana imwe nzvimbo yakanaka pane iyo tattoo inogona kukweverwa huru uye inotyisidzira nekuda kwezvakagadzirwa zvakanaka. image source
Haisi ivo vakadzi chete vari vateki vekambasi tattoo. Zvechokwadi, isu tinoziva kuti varume vacho ndivo vanogona kubata vibe kana zvichisvika kumatoto akadai. image source
Dzvanya pano kuti uwane mamwe Compass Tattoo Designs
hanzvadzi tattoosoctopus tattootattoos for girlsrudo tattoosrose tattoosflower tattoosscorpion tattooHeart Tattooslotus flower tattoochifuva tattooscouple tattoosshumba tattootribal tattoostattoo ideashenna tattooelephant tattootattoo yezisoangel tattoosAnkle TattoosFeather Tattookorona tattooscherry blossom tattoomimhanzi tattooscross tattooskoi fish tattoowatercolor tattoozuva tattoosrip tattoosback tattoosAnchor tattoosbutterfly tattoosmehndi designsleeve tattoosinfinity tattootattoos kuvanhumwedzi tattoosarm tattoosbirds tattoosdiamond tattooarrow tattooshamwari yakanakisisa tattooscat tattooseagle tattooszodiac zviratidzo zviratidzofoot tattooscompass tattoocute tattoosneck tattoosGeometric Tattoosmaoko tattoos